Wasaaradda dhalinyarada iyo waxbarashada madaniga ah waxay siisaa dhalinyarada 300 oo deeq waxbarasho ah - TELES RELAY
Wasaaradda dhalinyarada iyo waxbarashada madaniga ah ayaa dhalinyarada siisa 300 oo deeq waxbarasho ah
Liibiya, muhaajiriinta ayaa ku xayiran Tripoli - Jeune Afrique
Ka dib markii war-saxaafadeed ay ku dhawaaqday bixinta deeqaha tababarka xirfadeed, Minjec iyada oo loo marayo linchpin oo ah Xarunta Dhallinyarada Qaranka (ONJ) ​​ayaa soo ururisay saxaafadda Isniinta 13-keedii, 2020 si ay ugu martiqaaddo in ay gudbiyaan farriinta. ee fursadan dhalinyarada ah.
Sawirka shirka - DR
Waa xarunta faraha badan ee lagu horumarinayo dadka dhalinyarada ah ee tixraaca ee Yaoundé (CMPJ-Réf.Ydé) oo u adeegsaday qaab dhismeedka kulankan saxaafadda. Intii lagu gudajiray isdhaafsigaan, mas'uuliyiinta CMPJ-Ref.Ydé, ONJ iyo xarunta tababarka xirfadaha ee Farshaxanka iyo Farshaxanka (CFPAM), ayaa u sharxay saxaafadda, sharraxaadda tababbarkan tababarka xirfadeed ee ay bixiyeen. Dawlada iyo taas oo u eg hadiyad sanadka cusub loogu talagalay dhalinyarada Yaoundé iyo hareeraheeda.
ONJ waxay dooneysaa inay joojiso fikradaha qaldan ee ku saabsan deeqda waxbarasho
Xaqiiqdii, wada xiriirka ku saabsan bixinta deeqaha waxbarasho ee xirfadeed waxaa markii ugu horreysay qabtay CFPAM. Dhallinyaro badan ayaa u haystay inay khiyaano tahay oo ay lumiyeen fursadaha noocaas ah. ONJ marka loo eego howlgalladeeda madaxbanaan waxay go'aansatay inay qoorta ka murugiso aragtiyo, fikradaha la helay ee ay soo diyaariyeen dhalinyarada ee ku saabsan deeqahan waxbarasho, iyadoo hadda ay ku lug leeyihiin saxaafadda. Dowladda Cameroon waxay ka walaacsan tahay horumarka dhallinyaradeeda waxayna siisaa fursado xagga is-dhexgalka xirfadeed iyo shaqo abuurka, marka la soo gaabiyo, ciyaarta tababarka-shaqaalaynta. Fursadani waa mid ay heli karaan dhammaan dhalinyarada reer Cameroon. Looma baahna in la helo "kabo", looma baahna in la kafaalo qaado si loo helo suuqa saamiyada.
Isu-duwayaasha deeq waxbarasho ee Janaayo 2020-ka
Deeqaha tababarka xirfadaha waxaa heli kara dhalinyarada da'doodu tahay 15 ilaa 35. Kulankaan Minjec wuxuu bixiyay 300 deeq waxbarasho. Ogolaashadu waxay ku saleysan tahay dib u eegista feyl. Codsiyada waa la aqbali karaa maalin kasta oo shaqo xafiiska xoghaynta ee Madaxa CMPJ-Ref.Ydé. Si aad uga faa'iideysato deeqdan waxbarasho, waa inaad ka diiwaan gashan tahay barnaamijka ONJ. Tababbarku wuxuu soconayaa 8 bilood 2-dii bilood ee ugu dambeysayna wuxuu ku wajahan yahay layli shirkad. Qaabka jinsi ayaa loo tixgeliyaa. Haweenka waxaa lagu boorinayaa inay codsadaan. Dadka ka soo jeeda dabaqadaha bulshada ee liita sidoo kale waa la tixgeliyaa. Waqtiga kama dambaysta ah ee mawjaddan suuqa saamiyada waxaa loo dejiyay Janaayo 31, 2020, 16 galabnimo.
Tababbarka wuxuu ka dhacayaa CFPAM, oo ku yaal Ekounou. Kahor tababarka dhabta ah, dadka qaata deeqda waxbarasho anshax ahaan ayaa dib loogu habeeyay usbuuc. Sidoo kale inta lagu jiro hal usbuuc, kuwa haysta deeqda waxbarasho sidoo kale waxay qabtaan fadhiyo isboorti. Marxaladdan ka dib, CFPAM ayaa la wareegaysa tababarka. Koorsooyinka tababarku waxay ku xiran yihiin hal dhinac IT-ga: xoghaynta otomatiga xafiiska, xoghaynta xisaabaadka, xoghaynta maamulka, kombiyuutarka iyo dayactirka shabakadda, web master Dhinaca kale, tababarku wuxuu kaloo la xiriiraa warbaahin fara badan: sawir gacmeedka kombiyuutarka, tafatirka maqalka iyo muuqaalka, soo-saare barnaamij) Ugu dambeyntiina, waxaa jira tababaro maareyn ah: Dejinta iyo maaraynta mashaariicda, maareynta shaqaalaha, xisaabinta iyo maareynta kumbuyuutarka, xisaabinta iyo maareynta ganacsiga, maareynta hay'adaha Microfinance.
Dhamaadka tababarka waxaa xayiray difaac, shahaadada dhamaadka tababarka uu siiyay Wasiirka dhalinyarada iyo waxbarashada madaniga. Waxaa sidoo kale jira suurtogalnimada qaadashada imtixaanka qaran oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Shaqada iyo Tababarada Mihnadaha. Sanadkan 2019, 250 dhalinyaro ah ayaa tabobaray CFPAM.
Kormeerka dhalinyarada ee qaran waxaa la dhashey kadib qorshihii sedex sano ee dhalinyarada uu dejiyay Madaxa Dowlada sanadka 2016. ONJ waa madal Minjec ah oo lagu xoojiyo qaab dhismeedka dhalinyarada dhalinyarada. geeyo. Waxay leedahay, hawlgallada kale, kormeerka, hanuuninta, wacyigelinta iyo abaabulidda dadka dhalinyarada ah xoojinta bulshadooda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/societe/1111203-yaounde-le-ministere-de-la-jeunesse-et-de-l-education-civique-offre-300-bourses-aux-jeunes
Ivory Coast: Alassane Ouattara waxay dhowaan London kula kulmi doonaan Boris Johnson - JeuneAfrique.com
RAMFIS WUXUU KA MID AHAA SIYAASIYADA UGU BADAN EE GOOGLE 2019 - VIDEO
Dhaqanka / Ivory Coast: Masa 2020 wuxuu ku furmayaa 3500 oo fanaaniin